कति बढ्दै छ मलेसियामा रहेका नेपालीको तलब ! - jagritikhabar.com
कति बढ्दै छ मलेसियामा रहेका नेपालीको तलब !
मलेसियाले निजी क्षेत्रमा कार्यरत सम्पूर्ण कामदारको न्युनतम मासिक पारिश्रमिक वृ,द्धि गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मलेसिया सरकारले अघिल्लो बर्ष अ”क्टोबरमा घोषणा गरिएअनुसार एक सय रिंगिटले वृ:द्धि भएको न्युनतम मासिक पारिश्रमिक पुनः वृ:द्धि हुने अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरुले जनाएको छ ।
तर त्यबारेमा मलेसिया सरकारले कुनै आधिकारिक रुपमा बोलेको भने छैन । स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार घरेलु क्षेत्रमा कार्यरत कामदार सहित सबै कामदारका हकमा उक्त नयाँ पारिश्रमिक लागू हुनेछ ।
मलेसियामा कामदारको तलब मासिक कतिले वृ:द्धि हुनेछ भन्ने कुराहरु समाचार ए”जेन्सिले खोलुलाएको भने छैन ।
समाचार एजेन्सीहरुले बताए अनुसार मलेसियामा लागू भएमा अब मलेसियामा निजी क्षेत्रमा कार्यरत सबै स्थानीय र विदेशी दु”बैखाले कामदारले बढेको पारिश्रमिक पाउनेछन् ।
यो नीति पूर्ण रुपमा लागू भएमा यहांका विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत ५ लाखभन्दा बढी नेपाली यसबाट लाभान्वित हुनेछन् । मलेसियाले गत सन् २०१२ मे दिवसको अवसर पारेर पहिलोपटक न्युनतम पारिश्रीमक लागूसम्बन्धी नीति घोषणा गरेको थियो ।
यहां बहुसंख्यक नेपाली प’श्चिमी मलेसियामा कार्यरत रहेका छन् भने पूर्वी मलेसियामा काम गर्ने नेपालीको संख्या निकै कम छ ।
फ्रान्सले नेपालबाट सुरक्षागार्ड लैजाने, मासिक तलब २ देखी ३ लाख हुने
युरोपेली देश फ्रान्सले नेपालबाट सुरक्षागार्ड लैजाने प्रस्ताव अघि सारेको छ । नेपालका लागि फ्रान्सका राजदूत गिल्स बुर्बाओले यस्तो प्रस्ताव लिएन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठसँग छलफल गरेका छन् ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नेपालका लागि फ्रान्सका राजदूत गिल्स बुर्बाओले नेपाली नागरिकलाई फ्रान्सेली नागरिक सरह अधिकार दिएर सुरक्षागार्ड लगायतका कामदारका रुपमा लैजाने प्रस्ताव गरेका हुन् ।
साथै भाषागत रुपमा सिपालु र दक्ष कामदार लैजान समेत प्रस्ताव गरेको र सो सम्बन्धमा छलफल भइरहेको बुझिएको छ ।